Shuruudaha Isticmaalka | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Ogeysiis Muhiim ah oo Ku Saabsan Nuxurka Mareegta
Macluumaadka iyo xogta (guud ahaan, “Xogta”) ee ku yaala boggan waxaa loogu talagalay inaad ka hesho macluumaadka guud ee waxbarasho oo keliya. Xogta ma beddeli karto, oo looguma talo gelin inay, beddesho xiriirka aad la leedahay xirfadlayaasha daryeelka caafimaadkaaga. Xogta ku jirta mareegtan waa inaan loo tixgelin talo caafimaad oo looguma talagalin talo caafimaad ahaan.Haddii aad la kulanto xaalad degdeg ah oo caafimaad, waa inaadan isku hallayn wax macluumaad ah oo ku jira mareegtan waana inaad raadsato gargaar caafimaad oo degdeg ah oo habboon, sida inaad na soo wacdo “911”. Waa inaad had iyo jeer kala hadasho xirfadlayaasha daryeelka caafimaadkaaga sida loo ogaado cudurka iyo daawaynta, oo ay ku jirto macluumaadka ku saabsan daawooyinka ama daawaynta kugu habboon. Wax Xogta ku jirta mareegtan ah ma matasho ama dammaanad qaadayso in daawo kasta ama daaweyn gaar ah ay ammaan tahay, habboon tahay ama waxtar kuu leedahay. Macluumaadka caafimaadka si dhakhso ah ayuu isku beddelaa. Sidaas awgeed, waa inaad mar kasta ka xaqiijiso macluumaadka xirfadlayaasha daryeelka caafimaadkaaga.
Mareegtan waxaa loogu talagalay daalacdayaasha Mareykanka. Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan Maraykanka, waxaa laga yaabaa inaad ku aragto macluumaad mareegtan oo ku saabsan badeecadaha ama daawaynada aan la heli karin ama laga oggolayn dalkaaga.
Xogta waxaa ku jiri kara macluumaad ku saabsan daawaynta iyo beddelka guud ee daawooyinka dhakhtarku qoro qaarkood, waxaana laga yaabaa inay sharraxdo isticmaalka badeecooyinka ama daawaynada aysan ansixin Maamulka Cuntada iyo Daawooyinka. Xogtan waxaa loogu talagalay wargelin ahaan, laga leeyahay ujeeddooyin isbarbardhig kharash oo keliya. Ma ahan talo caafimaad oo beddel uma ahan la-talinta dhakhtarka, farmashiistaha ama xirfadlaha kale ee daryeelka caafimaadka. La hadal bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga si aad go'aan uga gaarto inaad daawada dhakhtarku qoro oo kale ay kugu habboon tahay.
Shaacitaannada La Iska Rabo
Guji halkansi aad u akhriso shaacinnada la iska rabo iyo macluumaadka la xiriira isticmaalkaaga mareegtan.
Heshiiska iyo Shuruudaha
Shuruudaha Isticmaalka Mareegtan (“Shuruudaha”) ayaa qeexaya sharciyadda isticmaalka mareegtan. Shuruudahaan waxay ka dhigan yihiin heshiis si sharci ah u dhexeeya adiga, qofka isticmaalaya mareegtan, iyo UnitedHealthcare. Haddii aad caawinayso qof kale si uu u isticmaalo mareegtan, shuruudahaan waxay ka dhigan yihiin heshiis sharci ah oo u dhexeeya caawiyaha iyo qofka isticmaalaya mareegtan labaduba, iyo UnitedHealthcare. Erayada sida “annaga” ama “-eena” iyo "Shirkadda” waxaa loola jeedaa UnitedHealthcare iyo shirkadaha ku xiran.
Markaad isticmaasho mareegtan, waxaad oggolaatay Shuruudaha ugu dambeeyay iyo sidoo kale nooca ugu dambeeyay ee Siyaasadahayaga Qarsoodida. Waxaa laga yaabaa inaan beddelno Shuruudahaan waqti kasta, isbeddellada noocan oo kale ah waxaa la soo gelin doonaa boggan ama bogga la midka ah ee mareegtan. Waxay mas'uuliyad kaa saaran tahay inaad dib-u-eegto Shuruudahaan mar kasta oo aad isticmaasho mareegahan. Markaad sii wadato isticmaalka mareegtan, waxaad oggolaatay isbeddel kasta oo ku yimaada Shuruudahayaga.
Markaad isticmaasho mareegtan, waxaad qiraysaa oo aad waafaqaysaa in hawl kasta oo ka socoto mareegtan ay korjoogtayn doonto Shirkadda wakhti kasta, iyo in Shirkaddu isticmaali karto natiijada korjoogtaynta noocaas ah bilaa xaddidaad, iyadoo la raacayo sharciga lagu dabaqi karo.
Haddii aad heshiis kale la gasho Shirkadda, tusaale ahaan ku saabsan qorshaha caymiska caafimaadka, markaa Shuruudahaan waa dheeraad marka lagu daro shuruudaha heshiiska kale. Midkoodna gelida heshiiskan, ama booqashada mareegtan, ama mid ka mid ah Shuruudahaan, ma dammaanad qaadayaan in aad u-qalanto inaad ka hesho caymiska hoos yimaada qorshe kasta oo lagu bixiyo mareegtan ama haddii kale.
Shatiga Isticmaalka Mareegtan iyo Lahaanshaha Xogta
Iyadoo la raacayo Shuruudahaan, Shirkaddu waxay ku siinaysaa shati shaqsiyeed, aan la bedeli karin, aan gaar ahayn, la burin karo, xaddidan si aad u eegto xogta ku jirta mareegtan iyadoo ujeeddadu kaliya tahay uruurinta macluumaadka ku saabsan qorshahayaga iyo hawlaha la xiriira sida, haddii laga oggolyahay mareegtan, codsashada qorshaha. Waxaa sidoo kale daabaci kartaa tiro macquul ah oo nuqullada Xogta ah si aad u isticmaasho, balse markan oo kale waa inaad dib u soo saartaa dhammaan ogeysiisyada xuquuqda daabacaada iyo astaanta ganacsiga. Dhammaan xuquuqaha, mulkiiliyada iyo danta ku jirta iyo ku wajahan mareegta, oo ay ku jirto Xogta, iyo dhammaan xuquuqda hantida aqooneed, oo ay ku jiraan dhammaan xuquuqda daabacaadda, astaanta ganacsiga, summada ganacsiga iyo xuquuqaha sirta ganacsiga ay ka kooban yihiin waa inay sii lahaadaan Shirkadda oo shati-bixiyayaashayada iyo iibiyeyaashayada, mana jirto dano lahaansho oo lagugu wareejinayo adiga ama cid kasta oo kale iyadoo ugu wacan tahay Xogta la heli karo ee ku jirta mareegta, ee oggolaanaya shatiyadii hore ama gelitaanka Heshiiskan.
Haddii ay dhacdo in aad doorato inaad na siiso wixii jawaab-celin ah, soojeedin ah, ama wadaxiriiro la mid ah, dhammaan fariimaha noocaan ah (si wadajir ah, “Farriimaha Jawaab-celinta”) waxaa loo tixgelin doonaa kuwo aan gaar ahayn, oo aan qarsoodi ahayn (marka laga reebo macluumaadka shakhsiyeed sida lagu qeexay Siyaasadahayaga Qarsoodida) oo aan laga ganacsan lahayn. Waxaad halkan ku siisay Shirkadda shati joogto ah, shati-hoosaad laga samayn karo, loo xilsaari karo cid kale, aan xaddidnayn, adduunka oo dhan ka jira, ka maran lacagta summada, aan laga noqon karin si ay u isticmaasho, u soo saarto, u bandhigto, fuliso, ugu dhaqanto, wax uga beddesho, uga abuurto wax asal ah ama wadar ah, u gudbiso oo u qaybiso Fariimahaaga Jawaab-celin, guud ahaan ama qayb ahaan, oo ay ku jiraan dhammaan xuquuqaha hantida aqooneed ee ku jira.
Qaar ka mid ah mareegaha ay maarayso Shirkaddu waxaa ka mid ah astaamaha ganacsiga ama summadaha ay leeyihiin shati-bixiyeyaasha kale ee dhinaca saddexaad ah waxaana loo adeegsadaa heshiiska lala galo dhinacyada saddexaad.
Waxaa laga yaabaa inaan joojino shatigan waqti kasta sabab kasta ha ahaatee. Haddii aad jebiso mid ka mid ah Shuruudahaan, shatiga ku aadan Xogta ayaa dhammaanayo isla markiiba. Markuu dhammaado shatigan waa inaad joojisaa isticmaalka mareegtan, oo ay ku jiraan dhammaan Xogta ku jirta, waana inaad soo celiso ama burburiso dhammaan nuqullada, oo ay ku jiraan nuqullada elektarooniga ah, ee Xogta ee aad hayso ama xakamayso.
Xayiraadaha La Saaro Isticmaalka Mareegtan
inaadan u isticmaalin mareegtan ama Xogtan sinnaba qaab aan si cad aysan u oggolayn Shuruudahaan ama qoraalka ku jira mareegta lafteeda;
inaadan nuqul ka samaynin, wax ka beddelin ama ka abuurin wax asal ah oo ku lug leh Xogta, marka laga reebo inaad daabacan karto tiro nuqullo ah oo macquul ah si aad ugu isticmaasho si gaar ah, iyadoo ku xiran tahay haddii aad dib u soo saarto dhammaan ogeysiisyada xuquuqda daabacaadda iyo summada ganacsiga;
inaadan si khaldan u sheegin aqoonsigaaga ama aadan nagu siin wax macluumaad ah oo been-abuur ah qayb kasta oo xog lagu uruurinayo oo ka mid ah mareegtan, sida diiwaangelinta ama bogga codsiga;
inaadan qaadin wax tallaabo ah oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo shaqaynta mareegtan;
inaadan gelinama isku dayin inaad gasho qayb ka mid ah mareegahan taasoo aan si cad laguugu oggolaan inaad gasho;
inaadan la wadaagin wax furaha sirta ah ee laguu qoondeeyay ama aad samaysatay dhinacyo saddexaad ama uusan isticmaalin furaha sirta ah ee lagu siiyay ama samaysatay dhinac saddexaad;
inaadan si toos ah ama si dadban ugu oggolaan cid kale inay qaado tallaabooyin lagu mamnuucay qeybtan;
inaad raacdo dhammaan sharciyadda iyo qawaaniinta la dabaqi karo inta aad isticmaalayso mareegahan ama Xogta. Inaad matasho oo dammaanad qaadayso inaad tahay ugu yaraan 13 sanno jir, iyo in haddii aad u dhexeyso 13 iyo 18 sanno jir uu waalid iyo/ama mas'uul oggolaado Shuruudahaan Isticmaalka iyagoo ku hadlaya magacaaga.
Gelinta Farriimaha, Faallooyinka ama Xogta
Qaybo ka mid ah mareegtan ayaa laga yaabaa in la habeeyo si loogu oggolaado isticmaalayaasha inay geliyaan fariimaha, faallooyinka, ama xogta kale. Xog kasta oo noocaas ah waa ra'yiga qofka soo dhigo, uma ahan beddelka cilmi-baaristaada gaarka ah, mana ahan in lagu tiirsanaado ujeeddo kasta oo laga leeyahay. Waxaad oggolaanaysaa inaadan gelinin wax xog ah:
oo cay, dhaleecayn, sumcad-dil, fuxshi, fisqi, qaawni, anshax-xumo, afxumo, dhibaatayn, hanjabaad, waxyeello, ku xadgudbida xuquuqaha asturnaanta ama dacaayada, xadgudubka, kicinta, ama sida kale la diidi karo; ama
gudbinta taasoo xadgudb ku noqon karta, ama fududayn karta ku xadgudbida, sharci, xeerar, ama xuquuqaha hanti aqooneed kasta.
Adiga ayaa kaliya mas'uul ka ah xog kasta oo la soo geliyo oo aad gudbiso oo Shirkaddu wax mas'uuliyad ah ama la xisaabtan ah kama saarna xog kasta oo aad soo gudbiso adiga ama cid kasta oo kale oo soo booqato mareegta. Waxaa laga yaabaa, balse waajib naguma ahan inaan xaddidno ama tirtirno farriin kasta iyo dhammaan xogta aan u go'aaminno si gaar ah inay xadgudub ku tahay Shuruudahaan ama sida kale waxyeello naga soo gaari karto annaga, macaamiisheena, ama dhinac kasta oo saddexaad. Waxaan xaq u leenahay inaan tirtirno xogta aad bixiso waqti kasta, balse waa inaad fahamto inaan dhawri karno oo geli karno nuqulka keydsan, waxaana laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno xogta haddii sharcigu sidaas farayo ama si daacadnimo ku jirto u aaminsantahay in gelitaanka noocaas ah, haynta, ama shaacinta sharcigu farayo ama ku jirto danta ugu wanaagsan ee Shirkadda.
Xog kasta oo aad soo gudbiso waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo si ganacsi ahayn oo keliya. Wax kasta oo aad soo gudbiso wuxuu soo dhex mari doonaa internet-ka waana inaad fahamto oo qirto in aadan wax rajo ah ka qabin asturnaanta la xiriirta xog kasta oo aad soo gudbiso. Marnaba ha u qaadan inaad qarsoodi tahay oo aan lagugu aqoonsan karin qoraalladaada.
Haddii aad geliso xog ama wax soo gudbiso, iyo haddii sida kale aan u tilmaamno mooyaane, waxaad siisay Shirkadda xuquuq aan gaar ahayn, ka maran lacagta summada ganacsi, joogto ah, aan laga noqon karin, iyo xuquuq si buuxda shati-hoosaad looga bixin karo si loo isticmaalo, loo soo saaro, loogu sameeyo wax-ka-beddel, la qabatimo, la daabaco, la turjumo, looga abuuro wax asal ah, loo qaybiyo, oo loogu soo bandhigo xogtan oo kale adduunka oo dhan iyadoo la adeegsanayo warbaahin kasta. Waxaad siinaysaa Shirkadda iyo mid kasta oo ka mid ah shati-hoosaad haystayaasheeda inay isticmaalaan magaca aad soo gudbisay ee la xiriira xogta noocaas ah, haddii ay doortaan. Waxaad matalaysaa oo dammaanad qaadaysaa inaad leedahay ama si kale u xakamayso dhammaan xuquuqaha xogta aad geliso; in xogtu tahay mid sax ah; Isticmaalkaas xogta aad bixiso ma jabinayso Shuruudaha iyo Xaaladaha mana u geysanayso waxyeello qofna ama shirkadna; iyo in aad magdhow ka siin doonto Shirkadda ama shairkaha ku xiran dhammaan qaansheegashooyinka ka dhashay xogta aad bixisay.
Ku Xadgudubka Xuquuqda Daabacaada – Ogeysiiska DMCA
Xeerka Xuquuqda Daabacaadda ee Dhijitaalka Kunka Sanno ah 1998 (“DMCA”) wuxuu siiyaa dib-u-hirasho mulkiilayaasha xuquuqda daabacaadda kuwaasoo aaminsan in walxaha la soo geliyo internet-ka ee u muuqda inay xadgudub ku yihiin xuquuqdooda sida ku cad sharciga xuquuqda daabacaadda ee Maraykanka. Haddii aad si daacad ah u aaminsan tahay in macluumaadka ama xogta ku jirta mareegtan ay xadgudub ku tahay xuquuqda daabacaadda ee aad adigu leedahay, adiga (ama wakiilkaaga) waxaad u diri kartaa shirkadda ogeysiis aad ku codsanaysaan in xogta la tirtiro, ama gelitaankeeda la xannibo. Codsigan waa in loo diraa:DMCARegisteredAgent@uhc.com; ama, beddelkeeda loo diraa: UnitedHealth Group, Ku Socoto: DMCA Registered Agent, 9900 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343.
Ogeysiiska waa inay ku jiraan macluumaadka soo socda: (a) saxiixa muuqda ama elektarooniga ah ee qofka u idman inuu matalo mulkiilaha xuquuqda gaarka ah ee lagu andacoonayo in lagu xadgudbay; (b) aqoonsiga hawsha loo sameeyay xuquuqda daabacaadda ee lagu andacoonayo in lagu xadgudbay; (c) aqoonsiga xogta lagu andacoonayo in lagu xadgudbay ama mawduuca hawsha lagu xadgudubay; (d) Magaca, cinwaanka, telefoonka, iyo cinwaanka iimaylka qofka cabanayo; (e) Bayaan dhigayo in qofka cabanayo aaminsan yahay inuu si daacadnimo ku jirto u aaminsan yahay in u isticmaalka xogta qaabka laga cabanayo uusan fasixin mulkiilaha xuquuqda daabacaadda, wakiilkiisa ama sharciga; iyo (f) bayaan dhigaya in xogta ku jirta ogeysiinta ay tahay mid sax ah, iyadoo qiraal dhaarasho lagu marayo, in cidda cabanayso loo oggolaaday inuu matalo mulkiilaha xuquuqda gaarka ah leh ee lagu andacoonayo in lagu xadgudubay Haddii aad u aamminsan tahay si daacadnimo ku jirto in ogeysiiska xuquuqda daabacaada si khalad ah loo gudbiyay, DMCA waxay kuu oggolaanaysaa inaad noo soo dirto ogeysiis lid ku ah. Ogeysiisyada iyo ogeysiisyada lidka ku ah waa inay buuxiyaan shuruudaha qaanuun ee markaas jira ee ay soo rogeen DMCA. Ogeysiisyada iyo ogeysiisyada lidka ku ah ee la xiriira mareegta waa in loo soo diraa cinwaanka sare.
Isbeddelada Mawduuca Mareegta
Waxaa laga yaabaa inaan beddelno, wax ku darno ama ka saarno ama Xogta oo dhan ee ku jirta mareegtan waqti kasta. Intaas waxaa dheer, fadlan ogow inkastoo hadafkayagu yahay inaan bixino macluumaad sax ah, sifooyin gaar ah oo laga yaabo in lagu bixiyo mareegtan, sida bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee kaqaybqaatayaasha ah, macluumaadka qiimaha ama Xogta kale, laga yaabo inaysan sax ahayn ama cusbeen. Intaas waxaa dheer, fadlan ogow in sifooyinka qorshe kasta ama qorshooyin kasta ee lagu qeexay mareegtan ay isbeddeli karaan waqti ka dib sida sharcigu qabo, oo ay ku jiraan heerarka macaashyada, walxaha ku jira diiwaan daaweed kasta, qiimaha ama liisaska bixiyayaasha kaqaybqaatayaasha ah ama iibiyayaasha kale ee la xiriira.
Markaad booqanayso mareegtan waxaad riixi kartaa xiriiriye ku gaynayo mareeg kale waadna ka bixi kartaa mareegtan. Waxaan bixinaa xiriiriyeyaasha mareegaha kale ee laga yaabo inay ku jiraan macluumaad waxtar leh ama xiiso kuu leh. Ma taageerno, mas'uulna kama nihin, xogta iyo saxnaanta mareegaha nagu xiriirsan ee ay adeegsadaan dhinacyada saddexaad ama loogu talagalay mid ka mid ah la macaamilka dhinacyadaas saddexaad. Adiga ayaa kaliya mas'uul ka ah la macaamilka aad la samayso dhinacyada saddexaad waxaana kugu dhiirigelineynaa inaad akhriso shuruudaha isticmaalka iyo siyaasadaha asturnaanta ee mareegaha dhinacyada saddexaad.
MA JIRO DAMMAANAD QAAD
DHAMMAAN XOGTA KU JIRTA MAREEGTAN WAXAA LAGUGU SIIYAA ADIGA QAABKA "SIDA AY TAHAY", "LOO HELI KARO". SHIRKADDA, DHAMMAAN DHINACYADA SADDEXAAD, HADDII AY JIRAAN, BIXINAYA XOGTA MAREEGTAN, IYO DHAMMAAN DHINACYADA SADDEXAAD EE BIXINAYA TAAGEERADA AMA MACLUUMAADKA MAREEGTAN, (GUUD AHAAN, “DHINACYADA LA XIRIIRA MAREEGTA”) WUXUU HALKAN KAGA AFEEFANAYAA DHAMMAAN DAMMAANAD QAADYADA NOOC KASTA AY AHAADAAN, KUWO MUUQDA AMA DAAHSOON, SHARCI AH AMA SIDA KALE AY KU JIRAAN BALSE AAN KU XADDIDNAYN DAMMAANAD QAADYADA DAAHSOON EE LAGA GANACSAN KARO AH, EE LAGA LEEYAHAY UJEEDDO GAAR AH IYO KU-XADGUDUB LA'AANTA.
DHINACYADA LA XIRIIRA MAREEGTA MA SAMEEYAAN WAX DAMMAANAD AH OO KU SAABSAN SAXNAANTA, DHAMAYSTIRANAANTA, WAQTIYAYSNAANTA, SAXNIMADA, AMA KU TIIRSANAANTA XOG KASTA OO LAGA HELI KARO MAREEGTAN. IYADOO AAN LA XADDIDAYN QODOBKA SARE, DHINACYADA LA XIRIIRA MAREEGTA SI GAAR AH UMA MATALAAN AMA AMA DAMMAANAD QAADAAN IN MACLUUMAAD KASTA OO KU SAABSAN MACAASHYADA QORSHE GAAR AH AMA BAAXADDA CAYMISKA AY UU SAX TAHAY AMA DHAMMEYSTIRAN TAHAY. DHINACYADA LA XIRIIRA MAREEGTA KAMA SAMEEYAAN WAX MATALAAD AH AMA DAMMAANAD QAAD AH ISTICMAALKA MAREEGTAN INAY NOQON DOONTO MID AAN KALA JOOGSI LAHAYN AMA KHALAD KA MARAN, IN CILLADAHA LA SIXI DOONO, AMA IN MAREEGTAN AMA TIKNOOLAJIYADA AY KA SAMAYSAN TAHAY KA MARAN YIHIIN FAYRASYO AMA WALXAHA KALE WAXYEELLADA LEH. WAXAAD MAS'UUL KA TAHAY INAAD SAMAYSO TAXADARRADA LAGAMA MAARMAANKA AH OO DHAN SI AAD U HUBISO IN XOG KASTA AAD KA HELI KARTO MAREEGTAN AY XOR KA TAHAY FAYRASYADA IYO WALXAHA KALE SUURTAGALKU TAHAY INAY YIHIIN KOODH KUMBUYUUTAREED OO WAXYEELLO GAYSAN KARA.
Gobolada qaarkood ma oggola xaddidaadaha dammaanad qaadyada daahsoon, marka mid ama in ka badan oo ka mid ah xaddidaadaha kor ku xusan ayaa laga yaabaa inaysan ku khusayn adiga. Ka hubi sharciyada deegaankaaga wixii xannibaadyo ama xaddidaado ah ee ku saabsan ka-dhaafitaanka dammaanad qaadka daahsoon.
WAXAAD OGGOLAANAYSAA IN MIDNA DHINACYADA LA XIRIIRA AY MAS'UULIYAD KA SAARAN TAHAY WAXYEELLO KASTA OO KA DHALATA ISTICMAALKAAGA AMA AWOODID LA'AANTAADA INAAD ISTICMAASHO MAREEGTAN AMA XOGTA. ILAALINTAN WAXAY DABOOSHAA QAANSHEEGASHOOYINKA KU SALAYSAN DAMMAANAD QAADKA, QANDARAASKA, DEMBIGA MADANIGA AH, MAS'UULIYADDA ADAG, IYO ARAGTI KALE OO SHARCI. ILAALINTAN WAXAY DABOOSHAA DHINACYADA LA XIRIIRA MAREEGTA, OO AY KU JIRAAN DHAMMAAN SHIRKADAHA NAGU XIRAN, IYO SARAAKIISHOODA, MAAREEYEYAASHOODA, SHAQAALAHOODA, IYO WAKIILADOODA. ILAALINTAN WAXAY DABOOSHAA KHASAARAHA OO DHAN OO AY KU JIRAAN IYAGOO KU XADDIDNAYN, KHASAARAHA TOOSKA AH AMA CAD, KHAASKA AH, SI KAMA AH U DHACAY, CAWAAQIIBTA LEH, HOR JOOGSIGA AH, IYO MAGDHOWYADA CIQAABTA LEH, MAGDHOWYADA SHAQSIYEED, FAA'IDOOYINKA LUMAY, AMA MAGDHOWYADA KA DHASHA HORXOGTA LUNTAY AMA CARQALADA GANACSIYEED. KHASAARAHA AMA MAGDHOWYADA GUUD, WADARTA AH, MAS'UULIYADDA DHINACYADA LA XIRIIRA MAREEGTA, OO AY KU JIRAAN DHAMMAAN SHIRKADAHA NAGU XIRAN, IYO SARAAKIISHOODA, MAAREEYEYAASHOODA, SHAQAALAHOODA, IYO WAKIILADOODA, HADDII AY JIRAAN, WAA INAY KU XADDIDNAADAAN QADARTA MAGDHOWYADAADA DHABTA AH, MA AHAN INAY KOR U DHAAFAAN $100.00 DOOLARKA MARAYKANKA. XADDIDAADA MAS'UULIYADDA WAXAA LAGA YAABAA INAYSAN KA DHAQANGELIN GOBOLADA QAARKOOD. MARNABA MA DHACAYSO IN DHINACYADA LA XIRIIRA MAREEGTA, OO AY KU JIRAAN DHAMMAAN SHIRKADAHA NAGU XIRAN, IYO SARAAKIISHOODA, MAAREEYEYAASHOODA, SHAQAALAHOODA, IYO WAKIILADOODA, AY MAS'UUL KAAGA NOQDAAN KHASAARAHA AMA MAGDHOWYADA AAN KA AHAYN QADARTA KOR LAGU SHARRAXAY. DHAMMAAN MAGDHOWYADA KALE, TOOSKA AH AMA CAD, SI KAMA AH U DHACAY, CAWAAQIIBTA LEH, HOR JOOGSIGA AH, AMA CIQAABTA LEH EE KA DHASHA ISTICMAAL KASTA OO MAREEGTAN AMA XOGTA AH WAY REEBAN YIHIIN XITAA HADDII DHINACYADA LA XIRIIRA MAREEGTA LAGULA TALIYAY SUURTAGALNIMADA MAGDHOWYADA NOOCAAS AH. WAXAAD OGGOLAANAYSAA IN AAD ISTICMAASHO MAREEGTAN ADIGOO MAS'UUL KA AH WIXII KU SOO GAARO. HADDII AAD KU QANACSANAYN MAREEGTAN AMA XOGTA, QAANCELINTA KUU GAARKA IYO KHAASKA KUU AH WAA INAAD JOOJISO ISTICMAALIDA MAREEGTAN.
Sharciga Jira iyo Sharciyada Xaddidaadaha
Sharciyadda Gobolka Minnesota ayaa xukuma Shuruudahaan oo tallabo dacwadeed kasta oo la qaado oo ka dhalata ama la xiriirta isticmaalkaaga mareegta, iyadoo aan loo eegin dooqa mabaadi'ida sharciyeed. Waxaad oggolaanaysaa in xadka awoodda sharciyeed kaliya ee saxda ah iyo goobta khilaaf kasta oo ka dhan ah shirkadda, ama si kasta ula xiriira isticmaalkaaga mareegtan, ay noqdaan gudaha gobolka iyo maxkamadaha dawladda dhexe ee ku yaala Gobolka Minnesota, USA Waxaad sidoo kale oggolaanaysaa oo aad waafaqaysaa cabbirida xadka awoodda sharciyeed ee maxkamadahaan ee la xiriira khilaaf kasta ay ku lug leedahay Shirkadda ama shaqaalaheeda, saraakiisheed, agaasimayaasheeda, wakiiladeed iyo adeeg-bixiyeyaasha. Haddii wax kasta oo ka mid ah Shuruudahaan la go'aamiyo inay yihiin kuwo aan ansax ahayn marka loo eego qaanuun ama sharci kasta, qoddobka noocaas ah ilaa xad loo arko in meesha laga saaray, oo dheelitirka Heshiiska sii ahaado mid la dhaqangelin karo.
Kahor inta aadan raadsan dariiq sharci ah oo aad u maciinsato waxyeello kasta oo aad aamminsan tahay inay kaa soo gaartay ama la xiriirto isticmaalkaaga mareegahan, waxaad oggolaanaysaa inaad qoraal ahaan nagu soo ogeysiiso oo aad na siiso 30 maalmo si loo saxo waxyeellada kahor inta aan la bilaabin wax tallaabo ah. Waa inaad bilawdo sabab kasta oo tallaabo dacwadeed ah hal sano gudaheeda kadib marka ay qaansheegashadu soo baxdo, ama waa lagaa joojin doonaa inaad qaado tallaabo dacwadeed kasta.
Si aad naga la soo xiriirto wax ku saabsan Shuruudahaan ama shaqaynta mareegtan lafteeda, nagala soo xiriir lambarka 1-866-633-2446, ama TTY 711 ama noogu soo dir cinwaanka soo socda:
Taariikhda Dhaqangalka Shuruudahaan waa Oktoobar 31, 2016.
Shuruudaha Dheeraadka ah
Waajibaadyada hoos yimaada qeybaha soo socda ayaa dhowraya joojinta Heshiiskan: Xusuusin Muhiim ah oo ku Saabsan Xogta Mareegta; Heshiiska iyo Shuruudaha; qaybaha Shatiga si loo adeegsado mareegtan iyo lahaanshaha xogta; Xayiraadaha isticmaalka mareegtan; Gelinta fariimaha, faallooyinka ama xogta; Ku Xadgudubka Xuquuqda Daabacaadda - Ogeysiiska DMCA; Isbeddellada ku yimaada mareegta; Linkiyada; MA JIRAAN WAX DAMMAANAD-QAADYO AH, XADDIDAADA MAS'UULIYADEED; Sharciga jira iyo sharciyada xaddidaadaha; Shuruudaha dheeraadka ah Haddii wax kasta oo Shuruudahaan ka mid ah ay ogaato inay sax ahayn maxkamad kasta oo awood u leh, sax ahaansho la'aanta qoddobkan ma saamayn doono ansaxnimada qoddobadan haray ee Shuruudahaan, kuwaasoo ahaan doono kuwo buuxa oo dhaqangala. Ma jirto wax ka tanaasulida Shuruudahaan ah oo loo qaadan karo ka tanaasulid dheeraad ah ama sii socota oo shuruudda ama xaaladda noocaas ah ama shuruud ama xaalad kasta oo kale. Waxaad oggolaanaysaa inaad difaacdo oo aad magdhaw siiso, Dhinacyada La Xiriira Mareegta iyo shirkadaha hoos yimaada, shirkadaha ku xiran, saraakiisha, agaasimayaasha, shaqaalaha, iyo wakiilada, oo aadan u qabsan wax qaansheegasho, dalbasho, ama magdhow ah, oo ay ku jiraan khidmadaha qareenada ee macquulka ah, ee ka dhasha ama la xiriira jebintaada Heshiiskan ama isticmaalkaaga ama si xun u adeegsigaaga Xogta ama mareegta. Ma wareejin kartid ama ma xilsaari kartid wax xuquuq ama waajibaad ah oo hoos yimaada Heshiiskan. Shirkaddu waxay wareejin kartaa ama ku wareejin kartaa xuquuqdeeda iyo waajibaadkeeda hoos yimaada heshiiskan.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.13.2022 waqtiga 01:36 GALABNIMO CDT